~ ဏီလင်းညို ~: လောင်မီးတစ်စ
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 2:56 AM
ကောင်းတယ်ဗျာ. . .
နှိုင်းယှဉ်မှု ဆိုတာ မရှိခင် အထိ ဘယ်အရာမှ မြင့်တယ် ၊ နိမ့်တယ် မရှိပါဘူး။ အားလုံးက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပါပဲ။
အဲ. . . နှိုင်းယှဉ်မိရင်တော့ အဲဒီလူက ပူလောင်စေတာပေါ့။
( x x x x x x x )
အင်း ဟုတ်ပ အဲလို မိန်းမတွေ အများကြီးတွေ့ဘူးတယ် ကိုဏီရေ
ဝတ္ထုလေး ကောင်းတယ် ဏီလင်းရေ...ဆွေ့လို အမျိုးသမီးတွေ့ဖူးတယ်၊ ကောင်ကလေးတွေ အားလုံးသူ့ကိုပဲ ကြိုက်ရမယ် ထင်မှတ်ထားတဲ့သူမျိုး၊ အတွင်းက သူ့ထက်သာတဲ့ သူတိုင်းကို မနာလိုဖြစ်နေတတ်ပေမဲ့ အပေါ်ယံချို နေသူပေါ့...ကြောက်စရာ သိတ်ကောင်းတယ်...
သူ့မနာလိုမှုတွေနဲ့သူ့ဟာသူပူလောင်နေတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးတယ်... ဆွေ့လိုလူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတပုံကြီးဘဲ
အရမ်းး ကောင်းတယ် ဗျာ ...
ဘယ်လို ပြောရမှာမှန်းတောင် မသိဘူးးး ..
မနာလို ဖြစ်တာ ဘာမှ မကောင်းဘူးး ...
ကူညီ နိုင်ရင် ကူညီ ...
တစ်ချို့ ဟာတွေကို အရမ်း တွေးတောနေရင်
ကိုယ့်ဘာသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစား၊ ရုံပါပဲ ...
ကိုကြီးကျောက်ဘော်ဒါ မိန်းမတွေရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို သူတို့ကယောင်္ကျားတွေကို မပြောတတ်တော့ အဲလောက်တော့ သတိမထားမိဘူး..သူတို့ခြင်း အမြဲတမ်း အပြိုင်အဆိုင်ရှိတာတော့ သတိထားမိတယ်...
မနာလိုဝန်သိုမှုဆိုတာ လူ့စိတ်ကိုတကယ်ပင်ပန်းစေတယ်နော်.. အချင်းချင်း ၀န်သိုခြင်းကင်းကြပါစေ......... ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုဏီလင်းညို။
အင်း ... ဟုတ်တယ် ...
စိတ်ထားတတ်ဖို့ လိုတယ် ... မထားတတ်ရင် ကိုယ်မွှေးတဲ့ မီး ကိုယ်ပဲ ပြန် ပူနေတတ်တယ်လေ ...
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူ့ဘ၀ခဏလေးမှာ မနာလိုခြင်းကင်း ၊ ငြူဆူခြင်း ကင်းရင် နေပျော်စရာကြီးပါ ...
ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ..နော..
ဏီဏီက မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကိုဖွဲ့တာ... ပြိုင်စံရှားပါလား.... တော်တယ် တူငယ်ချင်းရာ...
ကိုရင်လင်းညိုရေ၊ သူငယ်ချင်း တောင်းတဲ့စာအုပ်တွေ အခု ဒီမှာ မရှိဘူးဗျ။ ပြန်စာနောက်ကျတာ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ၀တ္ထုဖတ်သွားပါသည်။
ကိုဏီလင်းညို ရေ မိုက်တယ်ဗျာ
ယောကျာ်းလေး တစ်ယောက်က သူတို့ကိုနည်းနည်း အရေးစိုက်လိုက်ရင် ကြိုက်တယ် ထင်ပြီး နွားကျခိုင်းတဲ့ မိန်းမတွေလည်းရှိတယ်ဗျ (အကုန်လုံးကိုမပြောပါ) အဟဲ နောက်ဆုံးတော့လည်း သဘာဝ ဟာ သဘာဝပါ ပေ့ါလေး) ပိုစ့်လေးက မိုက်တယ်ဗျာ တစ်ချို့တစ်ချို့သော သူများကို ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်
အတွေးရော အရေးရော အရမ်းကောင်းတယ် ကိုဏီး....
ညီမလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အဲဒီလို မိန်းခလေးမျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်....
ပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့ လူတိုင်းမှာ မနာလို ၀န်တို စိတ်ဆိုတာ အနဲနဲ့ အများတော့ ရှိတတ်ရင် ရှိတတ်ကြမှာပေါ့နော်....
ဒါပေမယ့် အသိတရားနဲ့ မဆင်ခြင်ဘဲ အလွန်အကျွံဖြစ်သွားတဲ့ အခါကျတော့ ခံစားရတဲ့ အပူမီးက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီး လောင်မြိုက်သွားတာပေါ့လေ...
သြော်... ဆွေ... ဆွေ...
မိန်းခလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲထိ လှမ်းမြင်တတ်တယ်နော်..
မနာလို ၀န် တိုခြင်းဟူသော လောင်နေတဲ့မီးထက်ဆိုးပါတယ်
မိစ္ဆေယ စိတ်များ ဒုက္ခ ပေးရင် သတိတောင်မကပ် နိုင်တော့ပဲ ဘဝ ဆုံးပါး တဲ့အထိ ကျွမ်းမြိုက် ပူပင် ကြတယ်။
အင်းးး အဲ့ဒါလဲ ဒုက္ခတမျိုးပဲ ..
Jealous ဆိုတဲ့ စိတ်က တကယ်ဆိုးတဲ့ လောင်မီးပဲနော်..
အမှန်တော့ ကိုယ့်ထက်သာရင်လည်း မုဒိတာ ပွားနိုင်ရမှာပါ..
အပြင်မှာ ဆွေ့ထက်ဆိုးတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။။
ကြွေရုပ်လေးလိုလှပြီး အဆင်းဘီးတပ်သူများကိုလည်း ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်...
ဂူဂဲလ်အနယ်လစ်တစ်၏ နှိပ်စက်ခြင်းကို မလေး ခံနေရ၍ ဘလောဂ်တွေမှာ ကော့မန့်တွေ မန့်ချင်တိုင်း မန့်မရကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ် :D
တပါးသူရဲ့ အနေအထိုင်ကို စောင့်ကြည့်နေရပြီ ဆိုထဲက သက်သောင့်သက်သာ မရှိတော့ဘူး။ မနာလိုစိတ်ပါ ဝင်လာပြီ ဆိုရင်တော့ သွားပြီ။ ရင်ထဲမှာ မီးဖိုထားရသလို ဖြစ်မှာပဲ။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြည့်ဘဲ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ် အကောင်းဆုံး လုပ်တာပါပဲ။
တော်လိုက်တဲ့ ကိုဏီလင်းညို ...
ဝတ္ထုလေးကောင်းတယ်ဗျား.. မိန်းကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ယောင်္ကျားလေးဆို ဝတ္ထုအသွားအလာကဘယ်လို မျိုးဖြစ်ကြမလဲလို့ စိတ်ကူးထဲက တွေးမိတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဘာမှပေါ်မလာပါဘူးအကိုရေ.. အကို ခံစားရေးထားတာလေးတွေပဲစောင့်ဖတ်နေပါ့မယ်..